အရမ်းထိရောက်တဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်တဲ့ Circuit Breaker ၂ လမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်လိုက်နာသလဲ – Myanmar
အရမ်းထိရောက်တဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်တဲ့ Circuit Breaker ၂ လမှာ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်လိုက်နာသလဲ
September 24, 2020 admin Knowledge, News, Photo 0
ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာမှာ Singapore ရဲ့ Circuit Breaker ၂ လက အရမ်းကို ထိရောက်တယ်။ Dormitories က ကူးစက်တာက Community ကို ရောက်မလာဘူး။ ဒီနေ့ဆို Community မှာ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အစိုးရ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်လဲ ပြည်သူတွေ က လဲ ဘယ်လိုပါဝင်ကြလဲ ဆိုရင်…. 1. အိမ်ထောင်စု တစ်စုနဲ့ တစ်စု အလည်သွားလို့မရဘူး။ မိဘဆီလဲ သွားလည်လို့ မရသလို သမီးရည်းစားတွေလဲ တွေ့ခွင့်မပေးဘူး။ အိမ်ချင်းကပ် တိုက်ချင်းကပ် လဲ မသွားရပါဘူး။မိရင်ဒါဏ်ငွေ တယောက် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပါ..တိုင်လို့လဲ ရပါတယ်.. စုံတွဲ တတွဲ ဒါဏ်ငွေ ဆောင်ရပီးနောက်ပိုင်း..ကျန်တဲ့သူတွေ အကုန် လိုက်နာသွားကြပါတယ်။
2. ဆိုင်မှာ ထိုင်စားခွင့် မရှိဘူး။ အကုန် ပါဆယ်ထုပ်ရတယ်။ တန်းစီရင် ၃ ပေအကွာနဲ့ Social Distancing ထားပြီး တန်းစီရတယ်။ Social distancing Ambassadors တွေကို အဓိက လူများတဲ့ စျေးတွေ MRT တွေ ကျောင်းတွေမှာ ထားထားတယ်။ အချိန်တိုင်း ခပ်ခွါခွါနေဖို့ အော်နေတာပဲ။ အော်တယ်.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း မအော်ကြပါဘူး.. သတိပေးတယ်.. Sir Mum Brother Sister Ms. . အဲ့လိုလေး respect ပေးခေါ်ပီးမှ ရှင်းပြ ပါတယ်..ပြန်ခံ ပြောတဲ့သူတွေရှိလဲ စိတ်မတိုသလို.. ရဲခေါ်ပီးပဲ ဖြေရှင်းကြပါတယ်. 3. လူတိုင်း Mask တပ်ရတယ်။ မတပ်ရင် ဒဏ်ငွေ $300. ဒီနေရာမှာ Mask မတပ်ရင် ပြည်သူတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တိုင်လို့ရတယ်။ ခုချိန် ထိ တပ်ရတုန်းပါ..တိုင်လို့ ရတယ်ဆိုတိုင်း မတိုင်ကြပါဘူး.. Mask မေ့ကျန်ရင် ကိုယ့်ဆီ ပါတာလေး ပေးပီး သတိပေးကြပါတယ်.. ကလန်ကဆန် ဆိုမှပဲ တိုင်ကြပါတယ်.. 4. Group activity တွေ လုပ်မရဘူး။ Gym တွေ Stadium တွေ ရေကူးကန်တွေ အကုန်ပိတ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်ရင် ကိုယ့်အိမ်သား (သို့) တစ်ယောက်ထဲ လုပ်ရတယ်။
5. SHN (Stay-home-notice) ထိတဲ့သူတွေကို MOM (Ministry of Manpower) က Surprise visit တွေ Virtual/ Video call တွေလုပ်တယ်။ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ရင် အရေးယူတယ်။ Pass Holders တွေ Pass revoke လုပ်ခံရတာတွေ ရှိတယ်။ PR တွေ ပြန်သိမ်းခံရတဲ့အထိ အရေးယူခံရတယ်။ SHN ဆိုတာ အိမ်ပေါ်ကနေ အိမ်အောက်တောင် ဆင်းလို့မရပါ။
6. စျေးတွေမှာ အဝင်နဲ့ အထွက် လူဦးရေ ကန့်သတ်လိုက်တယ်။ မှတ်ပုံတင် နောက်ဆုံး စုံ မ ဂဏန်း နဲ့ ပဲ ဝင်ခွင့်ပြုတယ်..အိမ်မှာ တော့ လိုအပ်လို့ အ​ပြင်ထွက်ရရင် ကျမအမျိုးသား တယောက်ထဲ ဒိုင်ခံအပြင်ထွက်တယ် စျေးဝယ်တယ် ကျန်တဲ့ အိမ်သားတွေ တံခါးပေါက်နားတောင် မကပ်ရပါဘူး
7. Essential sector မဟုတ်တဲ့ ရုံးတွေ အကုန်ပိတ်တယ်။ အိမ်က လုပ်လို့ရသလောက် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းတယ်။ Essential မဟုတ်ဘဲ ခိုးဖွင့်တဲ့ ရုံးတွေရှိလို့ MOM က မိရင်တော့ ရုံးပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိ အရေးယူတယ်။ ဒါက ကိုယ်နားလည်သလောက် Singapore အစိုးရရဲ့ Covid ကိုက်တွယ်ပုံပါ။
ခုထိလဲ လူ ၅ ယောက်ထက် စုမရဘူး။Party တွေ Gathering တွေ ပေးမလုပ်ဘူး။ Club တွေ မဖွင့်ရဘူး။ လူတိုင်း Mask တပ်ရတယ်။ SocialDistancing ရှိရတယ်။Temperature တိုင်းရတယ်။ တစ်နေရာသွားတိုင်း တစ်ခါ Check in Check out လုပ်ရတယ် (contact tracing) အတွက်။ မြန်မာပြည်သူတွေလဲ အစိုးရကို ကူညီသောအားဖြင့် နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးကြပါလို့… 🙏🏻
Credit to- Nozomi Chan
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေ လို့ ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံ အကူညီသွားတောင်းမိ တဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့ အဖြစ်
ဆုံးသွားတဲ့ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက အကူသူနာပြုဆရာမလေးအတွက် ငွေဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ (ဖခင်နှင့် အင်တာဗျူး )